I-Broadway Getaway - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRemi
Wamkelekile eBangor! Ikwindawo ekufutshane neDowntown enembali kwintsapho ethe cwaka, i-Waterfront emnandi kunye nokuhambahamba imizuzu emibini ukusuka kwindlu kaStephen King yile flethi okanye indlu ekwicomplex enendawo yayo yokungena, ikhitshi elipheleleyo, igumbi lokuhlambela elihle kunye negumbi lokulala. Ifumaneka ngamaxabiso osuku, eveki nawenyanga. Iingcali zokuhamba zikhuthazwa ukuba zibuze. Abahambi abanezinja nceda ubuze. Sikumgama wemizuzu emihlanu ukusuka kuzo zombini izibhedlele ezinkulu.
Yonwabela indawo yokungena yabucala, ehlala ikhanya kakuhle. Ishawa enethayile iza kukunika uxinzelelo namanzi ashushu amaninzi, indlela entle yokuphumla emva kohambo olude. Ikofu neti ziyafumaneka xa kufikwa ibe ziyahambelana. Akukho mfuneko yokuthenga iibhotile zamanzi. Amanzi aseBangor acoceke kakhulu kwaye akhuselekile ukuwasela. Ukongezelela, kukho umphandle wokuhluza efrijini.
4.86 · Izimvo eziyi-185
Le ngingqi ikwindawo ehlala abantu kwaye ikufutshane nomgwaqo omkhulu weshishini okwenza ukhawuleze ungene kummandla ophakathi. Kukho iipaki ezininzi, ipuli yokuqubha kawonke-wonke eye yaxhaswa ngumhlali odumileyo waseBangor, iindawo zokudlala kunye nehlathi lesiXeko saseBangor kunye ne-Essex Park. Iifoto ezongezelelekileyo eziqukiweyo kule ndlu ziindidi zobuqu zezilwanyana zasendle kwanendalo eBangor nakwiiyure eziyi-1,5 zokuqhuba. Siyayonwabela indawo esiyijikelezileyo, ngokukodwa ehlotyeni kwaye siza kukuvuyela ukuchaza into ebangela umdla ukuba iindwendwe zethu ziyabuza.
Umbuki zindwendwe ngu- Remi
Siyavuya ukwamkela amalungu amatsha e-Airbnb kungekho zimvo zangaphambili. Ngenxa yokuba ukuqondana kukhokelela kumava anelisekileyo, kukho amanqaku athile okucaciswa:
1. Siyahluka kwihotele. Ngokomzekelo, akukho nkonzo yemihla ngemihla yeetawuli okanye yezinto zebhedi. Le ndlu inazo zonke izinto zebhedi onokuya kuzo kodwa xa kuza kuhlalwa ixesha elide iindwendwe kufuneka zihlambe impahla.
2. I-Airbnb ayiyo i-B&B. Nangona ikhitshi linento yonke kwaye liquka ezinye izinto ezingenakuphepheka akukho zidlo zifumanekayo okanye ziqukwe ekubhukisheni.
3. Ukuba unombuzo, icebiso, okanye nayiphi na ingxelo yokuba bekunjani, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi. Ngokufanayo, ukuba sinemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo siza kuqhagamshelana nawe buqu size sibuze kuqala.
Kunyaka ophelileyo siye sayithatha nzulu yonke ingxelo yokuba bekunjani kwaye indlu yahlukile kusuku lokuqala esivule ngalo. Siye sonwabela izimvo ezintle eziyi-50nangaphezulu, sadibana nabantu abaninzi ababangel 'umdla, sabona uStephen King ehamba ubuncinane izihlandlo ezimbini ibe iveni yokukhenketha eyi-SN imisa apha rhoqo.
Sikwaqalisa ukonwabela iindwendwe ezibuyayo ibe akukho nto ingako sincomayo kunoko. Enkosi ngokuba nomdla nokubhukisha kwakho!